Habraac ay qoreen Guuleed iyo Xaashi oo meesha laga saaray | KEYDMEDIA ONLINE
Habraac ay qoreen Guuleed iyo Xaashi oo meesha laga saaray
Guddiga Doorashooyinka, ayaa gebi ahaan meesha ka saaray habraacii doorashada Somaliland ee ay horay u qoreen Mahdi Guuleed iyo Cabdi Xaashi.
MUQDISHO, Soomaaliya – Guddiga Doorashooyinka Heer Federal (FIET), ayaa laalay habraaca doorashooyinka ee kuraasta Gobollada Waqooyi, [Soomaaliland] kaasoo ay diyaariyeen, Guddoomiyihii hore ee Aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullahi iyo Ra’iisul Wasaare ku xigeynka dalka Mahdi Maxamed Guuleed.
Habraacaas, ayaa hore loogu maamulay doorashadii kuraasta Aqalka sare ee BFS, waxayna lagu dooratay 11 kursi oo gigida odayaasha ku leeyihiin Soomaaliland.
“Waxaan caddaynaynaa in habraaca ay soo diyaariyeen masuuliyiin ka tirsan golaha baarlamaanka ee ka soo jeeda Soomaliland aan lagu dhaqmi karin, guddiga doorashada Soomaaliland wuxuu ku shaqaynayaa habraaca Golaha Wadatashiga Qaran”. Ayaa lagu yiri warka ka soo baxay FIET.
Mahdi Guuleed iyo Cabdi Xaashi, ayaa hore loogu eedeyay in ay ku tagri faleen awoodda maamulka doorashada, isla-markaasna ay boobeen kuras ay kaga mid noqonayaan baarlamaanka 11-aad, isla-markaasna kuwo kale u boobeen shaqsiyaad saaxiibbo la ah.
Hayeeshee, tallaabada Guddiga Doorashooyinka Heer Federal (FIET), ayaa ka dhigan in xaafiiska Ra’iisul Wasaaraha uu hoos u dhigayo awoodda Guuleed iyo Xaashi, ee doorashooyinka Soomaaliland.
Doorashooyinka Soomaaliya oo muddo sanad ah dib uga dhacay xillgii loo qorsheeyay, ayaa ku billowday boob baahsan, taas oo sababtay cabsooyin xooggan iyo musharixiintu qaadacaan natiijada doorashada.